नमोबुद्ध नगरपालिकाले बेवास्ता गर्दा मथुरापाटी पार्क अलपत्र ! – मिलिजुली खबर
नमोबुद्ध नगरपालिकाले बेवास्ता गर्दा मथुरापाटी पार्क अलपत्र !
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका आफैले अघि सारेको पार्क तीन बर्षमा पनि निर्माण पुरा हुन सकेको छैनन् । नगरपालिकाले वडा नम्बर १ मथुरापाटी फुलबारी पार्कलाई नमुना पार्क बनाउने भनेर काम थालिने गरेको थियो ।
तर तीन बर्ष सकिँदा पनि निर्माण पुरा गर्न धौ धौ परेको मथुरापाटी फुलबारी नमुना पार्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिनोद सत्यालले जानकारी दिनुभयो । ‘यो सिँगो नगरपालिकाकै ऐतिहासिक ठाउँमा बन्दै गरेको पार्क हो, तर तीन बर्षसम्म निर्माण पुरा गर्न सकेका छैनौँ, अध्यक्ष सत्यालले भन्नुभयो ।’
अहिलेसम्म काम नसक्नुको मुख्य कारण हो बजेट । ‘नगरपालिकाले बजेट नै पर्याप्त दिएको छैन्, आफ्नो गोजीको पैसा हालेर काम गर्नुस् । पछि दिउला भनेर भन्नुहुन्छ । हामीले कहाँबाट पैसा ल्याएर काम गर्ने ? त्यसैले पार्क अलपत्र अवस्थामा छ, अध्यक्ष सत्यालले भन्नुभयो ।’
तर नगरप्रमुख टिपी शर्माले भने पार्क निर्माणका बजेट दिईरहेको दाबी गर्नुभयो । ‘नगरपालिकाले पार्क निर्माणका लागि बजेट दिईएको छ, उहाँहरूलाई काम सकाउन कति पैसा आवश्यक पर्छ भनेर, सोधिरहेको छु । नगरपालिका रकम उपलब्ध गराउन तयार छ भनेकै छु, नगरप्रमुख शर्माले भन्नुभयो ।’
काम सकाएर आएको बढीमा पाँच दिनभित्र रकम भुक्तानी गरिदिने नगरप्रमुख शर्माले बताउनुभयो । ‘म आफैले शिलान्यस गरेको पार्क हो । नगरपालिकाले बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । अब अहिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट बनाउने काम चलिएरको छ । अपुग पैसा त्यो बजेटमा पनि समावेश गर्न सकिन्छ । काम सकाएर आएको बढीमा पाँच दिनभित्र पार्क निर्माणमा लागेको सबै रकम भुक्तानी हुन्छ, नगरप्रमुख शर्माले भन्नुभयो ।’
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सत्यालले भने वडाबाट १ लाख रूपैयाँ पाएको र त्यसले नपुग्ने बताउनुहुन्छ । ‘एउटा पार्क तीन तीन बर्षसम्म पनि निर्माण पुरा हुँदैन्, अहिले आफ्नै खर्च हालेर काम गर्नुस् भनेर मौखिक रूपमा भन्नुहुन्छ, यसरी काम गर्न गाह्रो हुन्छ नि, अध्यक्ष सत्यालले भन्नुभयो ।’
मथुरापाटी फुलबारी पार्क अलपत्र पर्नुमा आर्थिक अभाव नै रहेको उपभोक्ता समितिका सदस्य रविन्द्र सत्यालले बताउनुभयो । ‘यति सानो पार्क निर्माण पुरा गरेर तीन बर्षसम्म पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुका पछाडि आर्थिक अभाव नै हो, डिपीआर अनुसार काम गर्न बजेटको ब्यवस्थापन गर्ने दायित्व नगरपालिकाको नै हो ।’
मथुरेश्वर मन्दिरमा अहिले पनि दैनिक पुजारी राखेर पूजापाठ हुदैन आएको छ । यो क्षेत्र सत्याल बन्धुहरुको बाक्लो बसोबास रहेको ठाउँ पनि हो । ‘पार्कमा फूल बगैँचा, बस्ने ठाउँ, खानेपानी ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने छ, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बिनोद सत्यालले भन्नुभयो ।’
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको थामीडाँडामा भ्यूटावर शिलान्यास
बाह्रबिसेका स्वास्थ्यकर्मी माथि अभद्र व्यवहार गर्ने पत्रकार प'क्राउ